Marko Asɛmpa 3:1-35
Ɔsaa ɔbarima bi a ne nsa awu yare (1-6)
Nnipadɔm kɛse bi dii n’akyi kɔɔ mpoano (7-12)
Asomafo 12 no (13-19)
Abususɛm a etia honhom kronkron (20-30)
Yesu maame ne ne nua mmarima (31-35)
3 Yesu san kɔɔ hyiadan mu, na na onipa bi wɔ hɔ a ne nsa awu.*+ 2 Enti wɔhwɛɛ Yesu komm sɛ ebia ɔbɛsa onipa no yare Homeda no anaa, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛbɔ no sobo. 3 Ɛnna ɔka kyerɛɛ onipa a ne nsa awu* no sɛ: “Sɔre bra mfinimfini ha.” 4 Afei Yesu bisaa wɔn sɛ: “Ɛdɛn na mmara ma kwan sɛ wɔyɛ no Homeda, adepa anaa adebɔne? Sɛ́ wobegye obi nkwa* anaa wobekum obi?”+ Nanso wɔyɛɛ dinn. 5 Ɛnna ɔde abufuw hwɛɛ wɔn hyiae, na wɔn komaden+ no maa ne werɛ howee paa. Na ɔka kyerɛɛ onipa no sɛ: “Teɛ wo nsa.” Na ɔteɛe, na ne nsa no san yɛɛ yiye. 6 Ɛno nti Farisifo no pue kɔe, na ntɛm ara wɔne Herode akyidifo+ no kɔbɔɔ ne ho pɔw sɛnea ɛbɛyɛ a wobekum no. 7 Na Yesu ne n’asuafo no fii hɔ kɔɔ mpoano, na nnipadɔm kɛse bi fii Galilea ne Yudea dii n’akyi.+ 8 Nnipadɔm pii a wofi Yerusalem ne Idumea ne Yordan agya ne nkurow a atwa Tiro ne Sidon ho ahyia tee nneɛma pii a ɔreyɛ no, na wofii hɔ mpo baa ne nkyɛn. 9 Na ɔka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ wɔnhwehwɛ ɔkorow ketewa bi nsi hɔ mma no, na dɔm no ankyere no so. 10 Ɔsaa nnipa pii yare. Ɛno nti wɔn a wɔn yare mu yɛ den nyinaa befum ne ho sɛ wɔde wɔn nsa rebɛka no.+ 11 Sɛ ahonhom fĩ mpo+ hu no a, na wɔhwehwe ase wɔ n’anim teɛteɛm sɛ: “Wone Onyankopɔn Ba no.”+ 12 Na ɔka kyerɛɛ wɔn mpɛn pii sɛ wɔnhwɛ na wɔamma nkurɔfo anhu onipa ko a ɔyɛ.+ 13 Afei ɔforo kɔɔ bepɔw bi so, na ɔfrɛɛ wɔn a ɔpɛ,+ na wɔkɔɔ ne nkyɛn.+ 14 Ɛnna oyii 12 yɛɛ wɔn kuw baako, na ɔsan frɛɛ wɔn asomafo. Wɔn na na wɔbɛka ne ho na wasoma wɔn akɔka asɛm no, 15 na wɔanya tumi de atu ahonhommɔne.+ 16 Na 12+ a oyii wɔn no ne Simon, a ɔsan maa no din Petro,+ 17 ne Sebedeo ba Yakobo ne Yakobo nua Yohane (ɔsan too eyinom din Boanerges, a ɛkyerɛ “Aprannaa Mma”),+ 18 ne Andrea, Filipo, Bartolomeo, Mateo, Toma, Alfeo ba Yakobo, Tadeo, Nsiyɛfo Simon,* 19 ne Yuda Iskariot a akyiri yi oyii no mae no. Afei ɔkɔɔ ofi bi mu, 20 na nnipadɔm no behyiae bio ma enti wɔantumi annidi mpo. 21 Bere a n’abusuafo tee no, wɔkɔe sɛ wɔrekɔkyere no, efisɛ wɔkae sɛ: “Ne tirim ka no.”+ 22 Afei akyerɛwfo a wofi Yerusalem bae no kae sɛ: “Ɔwɔ Beelsebub,* na ɔde ahonhommɔne panyin no na etu ahonhommɔne.”+ 23 Ɛnna ɔfrɛɛ wɔn baa ne nkyɛn, na ɔde mfatoho ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛbɛyɛ dɛn na Satan atu Satan? 24 Sɛ ahenni bi ko tia ne ho a, saa ahenni no rentumi nnyina,+ 25 na sɛ ofi bi ko tia ne ho a, saa ofi no rentumi nnyina. 26 Enti sɛ Satan asɔre atia ne ho na ɔko tia ne ho a, ɔrentumi nnyina; mmom na n’awiei na ɛreba. 27 Obiara nni hɔ a obetumi akɔ ɔhoɔdenfo fi akowia ne nneɛma, gye sɛ odi kan kyekyere ɔhoɔdenfo no ansa na watumi asesaw nneɛma a ɛwɔ ne fi. 28 Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, wɔde nea nnipa mma bɛyɛ nyinaa bɛkyɛ wɔn, ɛmfa ho bɔne ko a wɔbɛyɛ ne abususɛm a wɔbɛka biara. 29 Nanso obiara a ɔbɛka abususɛm atia honhom kronkron no de, wɔremfa nkyɛ no da,+ mmom ne bɔne ho afobu da no so daa.”+ 30 Nea enti a ɔkaa saa ne sɛ, na wɔrekeka sɛ: “Ɔwɔ honhom fĩ.”+ 31 Afei ne maame ne ne nua mmarima+ bae, na wogyinaa abɔnten somaa obi sɛ ɔnkɔfrɛ no mmra.+ 32 Saa bere no, na nnipadɔm atwa ne ho ahyia, na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ! Wo maame ne wo nua mmarima gyina abɔnten rehwehwɛ wo.”+ 33 Na obisaa wɔn sɛ: “Henanom ne me maame ne me nua mmarima?” 34 Na ɔhwɛɛ wɔn a wɔtete ne nkyɛn no hyiae, na ɔkae sɛ: “Hwɛ, me maame ne me nua mmarima ni!+ 35 Obiara a ɔyɛ nea Onyankopɔn pɛ no, ɔno na ɔyɛ me nuabarima ne me nuabea ne me maame.”+